"एकतिहाइ जनता अझै पनि पूर्वाधारको सुविधाबाट बञ्चित छन्" - Nepal Japan
नेपाली समय : 10:55:21
जापानी समय : 02:10:21
“एकतिहाइ जनता अझै पनि पूर्वाधारको सुविधाबाट बञ्चित छन्”
22 March, 2019 19:48 | अन्तरवार्ता | comments | 28650 Views
मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. का कार्यकारी अध्यक्ष, इन्जिनियरिङ्ग कलेजका पूर्व संस्थापक एवं प्रिन्सीपल र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को सदस्य रहनु भएका श्रीराम न्यौपाने हाल सुरुङ्ग निर्माण विषयमा विद्यावारिधी गर्दै हुनुहुन्छ । विकासका अनगिन्ती मोडल साँचेर राख्नु भएका उहाँसँग नेपाल जापानकालागि सूर्य प्रसाद कोइरालाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ –
सबभन्दा पहिला पूर्वाधारबाट शुरु गरुँ ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासको इतिहास केलाउने हो भने शिक्षा क्षेत्रमा दरबार हाइस्कुल १६४ वर्ष अगाडि स्थापना भएको हो । त्यसै गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा वीर अस्पताल १८८९ मा स्थापना भयो । १८९५ मा पहिलो पटक खानेपानी पाइपबाट वितरण भयो । १९११ मा पहिलो पटक फर्पिङबाट बिजुली उत्पादन शुरु भयो । १९९७ मा पहिलो सुरुङ मार्ग बन्यो । जसलाई चुरियामाई वीरगञ्ज जोड्ने सुरुङ मार्गका नामले सुपरिचित छ । त्यसै गरी १९२२ मा पहिलो रोप वे (२२ कि.मी.) हेटौंडा काठमाडौं बनेको हो ।
दूरसञ्चारको माध्यमको रुपमा पहिलो पटक १९१३ मा टेलिफोन आयो जसको सुविधा तत्कालिन राणा शासकहरुले लिने गर्थे । १९५० मा सडक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्यो । सडक बनेपछि पहिलो पटक भारतबाट ट्रकमा ढुवानी गरेर तेल आयात गरिएको थियो । यी सबै इतिहास १०० वर्ष भन्दा बढी अवधिमा भएको हुन् । त्यसैलाई आधार मानेर आज हामी कहाँ छौं भन्ने केलाउनु जरुरी छ ।
समग्रमा हेर्दा र पूर्वाधार विकासलाई केलाउँदा एकतिहाइ जनता अझै पनि पूर्वाधारको सुविधाबाट पूर्णरुपमा बञ्चित छन् । जति पूर्वाधारमा विकास भएको छ त्यो परिमाणात्मक छ गुणात्मक छैन जसका कारणले नेपाल झन् झन् अविकसित मुलुकमा दर्ज हुँदै छ । ५० वर्ष अगाडिको भन्दा जीवनशैली सहज देखिए पनि मानव सुचकाङ्कको हिसाबले हेर्दा नेपालको स्थिति अन्य मुलुकको तुलनामा खस्कँदै गएको पाएँ ।
० तपाईँ प्राज्ञिक क्षेत्रमा समय बिताइरहनु भएको मानिस कसरी सुरुङ्ग निर्माणतर्फ आकर्षित हुनु भयो ?
मेलम्ची खानेपानीको सुरुङ्ग निर्माणका लागि अत्याधुनिक मेशिन भित्र्याइयो । त्यसको ६–८ महिनापछि नै ७२ सालको महाभूकम्प गयो । मसिन आयात गर्दा नै बिदेशी ठेकेदारले १ प्रतिशत राजश्व तिरेर भित्र्याउन पाउने । स्वदेशी ठेकेदारले भने २२ प्रतिशतसम्म राजश्व तिर्नुपर्ने अवस्थाबाट गुज्रँदै हामीले उपकरण भित्र्याउनु पर्याे । अब २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिसक्दा समेत विकास र समृद्धिका नारालाई चरितार्थ बनाउन स्वदेशी कम्पनीलाई १ प्रतिशत र विदेशीलाई २२ प्रतिशत तिर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान राख्नु पर्ने अवस्था देख्छु म । समयानुकुल कानूनमा परिमार्जन गर्न नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी हो भन्ठान्छु म ।
कुनै पनि देशले कस्तो विकास मोडल प्रस्तुत गर्ने भन्ने कुरा त्यसभित्र निहित प्राकृतिक स्रोत साधनमा निर्भर गर्छ । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दा जलविद्युत, जडिबुटी, खानी र पर्यटन यी चार कुरा नेपालको आफूभित्र निहित शक्ति हो । नेपालले कपडा उद्योग खोलेर भारत र चीनसँग कहिल्यै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । तर बिजुली निकालेर भारत र चीनलाई बेच्न भने सक्छ ।
विभिन्न देशले अनुकरण गरेका विकास मोडललाई हेर्ने हो भने भारतले कृषिमा आधुनिकीकरण मोडल, चीनले औद्योगिकीकरणको मोडल, दक्षिण कोरियाले मध्यमस्तरीय प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको मोडल, मलेशियाले बन्द हड्ताल गर्न नपाउने मोडल र सिंगापुरले सेवा र बस्तुमा न्यूनतम कर लगाउने (कर छुट) मोडल अवलम्बन गरेका कारण उनीहरु विकास र सम्बृद्धि हासिल गर्न सक्षम भए । नेपालले पनि जलविद्युत र पर्यटनलाई विकास मोडलको रुपमा अघि सारेर सम्बृद्धि हासिल गर्न सक्ने देखिन्छ ।